dingana drill bits
T-slot farany fikosoham-bary
Round orona fikosoham-bary
Niorina tamin'ny 2015, MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd dia nitombo tsy tapaka ary nandalo Rheinland ISO 9001 fanamarinana.
Miaraka amin'ny foibe fikosoham-bary dimy axe alemana SACCKE, foibe fanaraha-maso fitaovana enina ZOLLER ZOLLER, milina Taiwan PALMARY ary fitaovana famokarana mandroso iraisam-pirenena hafa, dia manolo-tena amin'ny famokarana fitaovana CNC avo lenta, matihanina ary mahomby izahay.
Ny mampiavaka anay dia ny famolavolana sy ny fanamboarana ireo karazana fitaovana fanapahana karbida mafy orina: Fikosoham-bary farany, borosy, reamers, paompy ary fitaovana manokana.
Ny filozofian'ny orinasanay dia ny manome vahaolana feno ho an'ny mpanjifanay izay manatsara ny fiasan'ny milina, mampitombo ny vokatra ary mampihena ny vidiny.Serivisy + kalitao + Fampisehoana.
Ny ekipan'ny Consultancy dia manolotra ihany koa ny fahaiza-mamokatra, miaraka amin'ny vahaolana ara-batana sy nomerika isan-karazany hanampiana ny mpanjifanay hivezivezy soa aman-tsara amin'ny hoavin'ny indostria 4.0.
manaova fomba fiasa azo ampiharina amin'ny fampiharana ny fahaizana manapaka metaly avo lenta mba handresena ny olan'ny mpanjifa.Ny fifandraisana miorina amin'ny fifampitokisana sy ny fanajana dia tena ilaina amin'ny fahombiazantsika.Miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa izahay mba hahatakarana ny filan'izy ireo.
Raha mila fanazavana lalindalina kokoa momba ny faritra manokana ao amin'ny orinasanay dia tsidiho azafady ny tranokalanay na ampiasao ny fizarana contact us mba hanatonana mivantana ny ekipanay.
Manana mpiasa maherin'ny 50 izahay, ekipa injeniera R&D, injeniera ara-teknika zokiolona 15, varotra iraisam-pirenena 6 ary injeniera serivisy 6 taorian'ny varotra.